किन बढ्यो खसीबोकाको मूल्य ? – 710614 | Bishow Nath Kharel
किन बढ्यो खसीबोकाको मूल्य ? – 710614
Posted on October 1, 2014 by bishownath
विश्वनाथ खरेल ,
दशैं नजिकिँदै जाँदा मुलुकमा खसीबोकाको मूल्य पनि उच्च हुँदै गएको छ । दशैंमा बलि दिएर पूजा गर्न बोका खोज्नेहरु बढ्न थालेपछि मूल्य पनि बढ्न पुगेको हो । विगत वर्षमा किनेको रकमले यसपटक ग्राहकले खसी किन्न सक्ने अवस्था छैन । पोहोर सालसम्म पाँच हजार मूल्य पर्ने बोका यो वर्ष सात हजारभन्दा बढी पर्न थालेको छ । अघिल्लो वर्षहरुमा ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलै खसीबोका पाइने गरेकामा यसपटक भने धौधौ छ । करिब १२ किलो तौलको बोकाको मूल्य १० हजारको हाराहारीमा पर्न थालेको खसीबोका व्यवसायीहरु बताउँछन् । मुलुकमा उत्पादन घटेको र माग अत्यधिक बढेकाले मूल्य दोब्बर बढेको स्थानीय किसानहरु बताउँछन् । मासुको बढी खपत हुने दशैं र तिहार बाहेकको समयमा समेत गाउँमा खसीबोकाको मासु प्रतिकिलो हाल आठ सय रुपैयाँ रहेको छ । मुलुकमा कुल बाख्रा/बोकाको संख्यामा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ को दाँजोमा २०६५/०६६ मा ८४ लाख ७३ हजार ८२ संख्या अर्थात् चार दशमलव १४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तैगरी बाख्रा÷बोकाको संख्यामा आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा कुल बाख्रा/बोकाको संख्या ९७ लाख ८६ हजार तीन सय ५४ पुगेको अनुमान गरिएको छ । जसबाट सोही आर्थिक वर्षमा मासु उत्पादन भने ५५ हजार पाँच सय ७८ मेट्रिक टन भएको छ । यस वर्षको दशैंलाई लक्षित गरेर राजधानीमा मात्र करिब ५५ हजार खसीबोका ल्याइने भएको छ । स्वदेशी र विदेशी गरी यो संख्यामा खसीबोका ल्याउन लागिएको हो ।
यीमध्ये करिब ९१ प्रतिशत भारतबाट आयात गरिनेछ । सामान्य दिनभन्दा दशैंमा झन्डै तीन गुणा माग बढ्ने भएकाले सोहीअनुसार खसीबोका भित्र्याउने तयारी भएको हो । यसपटक विभिन्न तीन निकायले खसीबोका ल्याउने तयारी गरेका छन् । नेपाल माछामासु व्यवसायी संघले १२ हजार, नेपाल खाद्य संस्थानले तीन हजार पाँच सय र चौपाया खरिदबिव्रmी सेवा संघले ४१ हजार खसीबोका भित्र्याउन लागेका छन् । यसका अतिरिक्त करिब अढाइ हजारको संख्यामा च्याङ्ग्रा र पाँच सय राँगाभैंसी पनि ल्याइनेछ । दशैंमा मात्रै करिब तीन अर्बको खसीबोका भारतबाट आयात हुने उनीहरूको अनुमान छ । चीनबाट पनि च्याङ्ग्रा आयात हुने व्यापारी बताउँंछन् । नेपाल माछामासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष अनिल खड्गीका अनुसार सामान्य दिनमा उपत्यकामा दैनिक एक हजार एक सय खसीबोका भित्रिने गरेकोमा दशैंको समयमा दैनिक तीन हजारको संख्यामा खपत हुन्छ । गत वर्ष बर्डप्mलुका कारण कुखुराको अभाव भएकाले करिब ६५ हजार खसीबोका बिक्री भएको व्यवसायीले बताएका छन् । फूलपातीदेखि टीकासम्म खसीबोकाको बढी बिक्री हुन्छ । निजी क्षेत्रले भारतका कानपुर, लखनउ, हरियाणा लगायतका स्थानबाट खसीबोका आयात गर्दै आएको छ । नेपालको मकवानपुर, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप, नुवाकोट, धादिङ, दाङ, लाहान, नेपालगञ्ज, सुर्खेत लगायतका स्थानबाट खसीबोका भित्रिने गरेको छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा दशैंमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने परिवारले समेत ऋण गरेर खसी बोकाको मासु किन्छन् । मुलुकमा सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाले घरमै खसीबोकाको बलि दिएर मासु खान्छन्, दशैंमा मूल्य बढी हुने भए पनि अहिलेजस्तो चर्को मूल्य कहिल्यै नभएको खसी व्यापारीहरु बताउँछन् । मुलुकमा बाख्रा/बोका संख्यामा वृद्धि भएको सम्बन्धित निकायको अनुमान रहेको छ । देशमा बढ्दै गएको जनसंख्याको मासुको माग दिन प्रतिदिन वृद्धि भएको छ । यसलाई तराई, पहाड र हिमाली भेगमा पालिने बाख्रा/बोकाले केही हदसम्म भए पनि धान्दै आएको छ । छिमेकी देश भारतबाट हाम्रो ठूला चाडबाडहरुको लागि बोका÷खसी ल्याइँदै आएकोमा तराईमा कृषि विकास बैंकमार्फत कृषकहरुलाई बाख्रापालन कार्यक्रमबाट पनि प्रत्येक साल दशैं जस्तो महान् पर्वका बेला कृषकहरुले पालेका खसी÷बोकाहरु राजधानी लगायतका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा आयात गर्ने गरिएको छ । छिमेकी देश चीनबाट पनि प्रत्येक साल भेडा च्याङ्ग्रा नेपाल सरकारलाई दिँदै आएको पनि केही वर्षयता आफ्नै देशको तराई तथा पहाडी भागमा बढी मात्रामा बाख्रापालन व्यवसायलाई जोड दिन थालेपछि स्वदेशमा नै आफूलाई चाहिने मासुको उत्पादन गर्न लागिएको हो । ग्रामीणस्तरका विभिन्न कृषकहरुले बाख्रापालन गर्ने गर्छन् । विगतमा धेरैजसोले यिनै क्षेत्रबाट खसीबोकाको आपूर्ति गर्ने गर्थे । वर्सेनी माग बढ्दै गए पनि बाख्रापालन व्यवसायको व्यवसायीकरण हुन नसकेकाले दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वमा खसीबोकाको अभाव हुँदै गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । बाख्रा वध गर्ने प्रचलनले पनि खसीबोकाको उत्पादन ह्रास आएको पशु सेवाका विशेषज्ञहरु बताउँछन् । यसको कारणले गर्दा नै प्रत्येक साल यस व्यवसायमा वृद्धि नै भएता पनि बढ्दो जनसंख्यालाई आपूर्ति हुने किसिमले उत्पादन हुन नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञहरुको दाबी रहेको पाइन्छ । यसर्थ विभिन्न स्वदेशी र विदेशी निकायहरुबाट भित्रिने खसीबोकाहरुको गुणस्तरमा जाँचबुझ गर्न सरकारी पक्ष चनाखो हुनुपर्ने टड्कारो अवस्था देखिन्छ । खाद्य संस्थान र चौपाया खरिदबिव्रmी सेवा संघले पनि भारतसहित नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट खसीबोका खरिद गर्छ । राजधानी भित्रिने खसीबोका उपत्यकाका सात सय दुई जना व्यवसायीमार्फत बिक्रीवितरण हुँदै आएको माछामासु व्यवसायी संघले जनाएको छ ।
चाडबाडको समयमा ठूलो परिमाणमा खसीबोका भित्रिए पनि तिनको स्वस्थताका बारेमा आधिकारिक तथा भरपर्दो रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण हुने गरेको छैन । निजी क्षेत्रका अनुसार दशैंको अवधिमा भेटेनरी चिकित्सक भनिने कर्मचारीले गोजीमै स्टाम्प र लेटर प्याड बोकेर हिँड्ने गर्छन् । तिनले खसीबोका संकलन केन्द्रमा गएर आर्थिक चलखेलको आधारमा बिरामी खसीबोकालाई पनि स्वस्थ भनेर स्वस्थता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा खेलबाड गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा उपभोक्ता आफैं सचेत हुनु आवश्यक छ ।
Source : http://www.aarthikdainik.com.np/news_details/11193/-